यती ठुलो भए कृष्ण र रूपाको छोरा, कृष्णले बनाए यस्तो भिडियो ! (भिडियो सहित) – Yuwa Aawaj
यती ठुलो भए कृष्ण र रूपाको छोरा, कृष्णले बनाए यस्तो भिडियो ! (भिडियो सहित)
जेठ ९, २०७८ आइतबार 462
कृष्ण र रुपले एक महिना अघि जन्मि’एको छोराको एउटा भिडियो बनाई सार्वजनिक गरेका छन् । आफ्नै युटुब चानेलमा उक्त भिडियो सार्वजनिक गरका छन् । उनीहरूले विभिन्न पोजका फोटो हरुलाई भिडियो बनाई युटुबमा राखेका हुन् ।
दाङ्को तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१४ बखरिया भन्ने ठाउँमा ग्राहकलाई विद्युतको लाइन प्रवा’ह गर्न पोलमा चढेको बेला क’रेन्ट लागेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन, ‘एउटा पोलमा लाईन का’टेर म लाइन विस्तार गर्नको लागि अर्को पोलमा चढेर करिब–करिब तार जोड्ने काम सकिएको थियो।
लाइन काटिएको ठाउँमा एक जना स्थानीय मिल सञ्चालकले विद्युतको लाइन जोडि’दिएछन् ए’क्कासी आएको ११ हजार भोल्टे’जको क’रेन्टले म जमीनमा बजारिए।’ उनलाई विद्युतको झ’ड्काले जमिनमा पछारिएनन् मात्र, करेन्टले मृ’त्युको मुखमा लगेर छोड्यो।
करेन्ट लागेर उनको शरिरका विभिन्न ठाउँमा गहिरो चो’ट लागेको थियो। त्यहाँबाट उनलाई उपचारको लागि तत्काल नेपाजगन्ज लगिए पनि त्यहाँका कुनै पनि अ’स्पतालमा उपचार सम्भव भएन्। त्यसपछि उनका आफ्न्तले कृष्णलाई भारतको लखनउमा पुर्याएका थिए।
विद्युत प्राविधिक कृष्णले पैसा कमाई श्रीमतीलाई स्टाप नर्स बनाउने सपना बुनेर काम गरिरहेका थिए तर अचानक यस्तो दुर्घ’टना घट्यो। ‘मेरो लागि नै उहाँले काम शुरु गर्नुभएको हो, मलाई स्टापनर्स बनाउको लागि आवश्यक पर्ने पैसा कमाउन जानुभयो। अब म प्रोफे’शनल नर्स नभए पनि पर्सनल नर्स बनेर उहाँलाई साथ् र माया बाड्ने छु।’ रुपाले भनिन्।
कृष्णले एक वर्ष पहिले मात्रै वि’वाह गरेका थिए। उनको त्यो घ’टना विवाह भएको ठिक वर्ष वितेको दिनमा भएको हो। विश्वभरीका नेपालीले उनलाई सहयोग गरे । अहिले उनी केही सहज जीवन विताइरहेका छन् । यो अवस्थामा दिएको साथका कारण अहिले रुपा र कृष्णलाई अहिलेका साक्षत मुना मदन भनेर प्रसंशा गरिरहेका छन् ।
छोराको भिडियो !
Prevचिकित्सक भन्छन् : आँखा अगाडि बिरा’मीको छट’पटाहट देख्दा भोक, प्या’सनै बि’र्सन्छौँ ।
Nextमजदू-रलाई छाक टा’र्न गा’ह्रो भन्छन्- ‘भारी बोक्दा प्र’हरीले भा’टा हान्छ, सर’कार हामी के गरी खाने ?’
फर्सीको मुन्टा र ग’टा खानुको अचम्मैको फइदाहरु ।
यती धेरै खुसी रमेश प्रसाई र नन्दा को छोरोको आगमन बधाई नदिनेलाई यस्तो सन्देश । (14858)
१. यती धेरै खुसी रमेश प्रसाई र नन्दा को छोरोको आगमन बधाई नदिनेलाई यस्तो सन्देश । (14858)